Realme GT Master Edition, famakafakana lalina sy fisedrana fakan-tsary | Androidsis
Raha manaraka anay tsy tapaka ianao dia ho fantatrao izany vao haingana izahay dia nandinika ny Realme GT, fitaovana avy amin'ny orinasa aziatika te-hanery ny mantra an'ny sandam-bola ohatrinona no tadiavin'ny mpampiasa Android. Ankehitriny dia manana famoaka indray izahay eto aminay izay tsy tadiavinao halaina.
Jereo miaraka aminay ny Realme GT Master Edition, fitaovana izay satro-boninahitra miaraka amin'ny raikipohy izay efa fantatsika. Izahay dia mijery lalina ity fanampim-panazavana Realme farany ity ary mamantatra raha tena mahaliana tokoa izy io raha ny fahitana azy. Aza hadino ny fijerinay, inona ny anao?
Nanapa-kevitra ny hanova kely ny endrika fandinihanay izahay, amin'ity indray mitoraka ity dia hivoaka ny YouTube ary afaka mankafy azy ireo amin'ny alàlan'ny tambajotran-tseraseranay ianao. Azonao atao ny mijery ny fandefasana boaty ity Realme GT Master Edition ny alalan ' Twitter ary koa amin'ny alàlan'ny Instagram, noho izany aza adino izany ary araraoty ny fotoana hanarahana anay. Raha tianao izany dia azonao atao ny mividy azy amin'ny AliExpress miaraka amin'ny tolotra fampidirana.
1 Famolavolana japoney, famolahana ny curl
3 Atiny multimédia
4 Fitsapana fakan-tsary
5 Fifandraisana sy fizakan-tena
Famolavolana japoney, famolahana ny curl
Na dia manana andalana lehibe avy amin'ny Realme GT aza izy io, ity Master Edition ity dia misy antsipiriany sasany izay manintona kokoa azy, na farafaharatsiny zavatra kanto kokoa. Manana chassis polycarbonate izahay, zavatra iray izay hita miharihary amin'ny lanjan'ny 178 grama (tafiditra ao anaty hoditra vegan). Ilay ravina vinina toy ny hoditra, na izay antsoin'izy ireo ankehitriny hoditra vegan ao aoriana dia misy fanamaivanana tena manintona sy famaranana avo lenta.
Dimensions: 159 * 73 * 8 (8,7mm misy hoditra vegan)
lanja: 174 grama (178 grama misy hoditra vegan)
Amin'ny lafiny iray, ny 16 santimetatra ny halavany dia somary mahazo aina isan'andro raha jerena ny hazavany sy ny hateviny 8 milimetatra. Ny faritra fakantsary farany malaza dia mahavariana, raha ny bokotra Power kosa mijanona eo amin'ny bokotra ankavanana ary ny volavola eo ankavia. Ho an'ny bezel ambany, ny USB-C dia tavela miaraka amin'ny perforation an'ny mpandahateny sy ny Jack 3,5 mm izay mbola eo.
Ny boaty dia misy tranga silipo matte vita vita tsara ary izany dia manahaka tanteraka ny famolavolana ilay fitaovana tany am-boalohany, zavatra miavaka. Toy izany koa no mitranga amin'ny sarimihetsika mpiaro ny efijery klasika izay efa napetraka ary mamporisika anao aho hisolo vera antonony, zavatra mampiakatra ny fahatsapana kalitao amin'ny finday rehetra.
Manitsy ny fitaovana ilaina hanamboarana ny vidiny, Ity Realme GT Master Edition ity dia tonga miaraka amin'ny Snapdragon 778G miaraka amin'ny mifanentana amin'ireo tamba-jotra 5G ary miaraka amin'ny RAM GBDDR8 5 GB izay hanampiana RAM 3 GB virtoaly, farafaharatsiny ao amin'ilay singa izay nosedraina sy tanjon'ity fanadihadihana ity. Mikasika izany, Realme dia tsy mikororosy, satria mitranga amin'ny fitehirizana 128 GB, na dia tsy afaka nanamarina aza izahay raha manana rafitra UFS 3.1 tahaka ny nitranga tamin'ny zokiny lahy. Raha ny GPU kosa dia miloka amin'ny Adreno 642L araka ny nandrasana.
modely GT Master Edition
processeur Qualcomm Snapdragon 778G - 5G
ram LPDDR8 5 GB + Virtual 3 GB
Tahiry anatiny 128
Fakan-tsary aoriana 64MP f / 1.8 + 8MP UGA 119º f / 2.3 + 2MP Macro f / 2.4
Fakan-tsary aloha 32 f / 2.5 GA 78º
Conectividad Bluetooth 5.2 - 5G DualSIM- WiFi 6 - NFC - GPS Dual
bateria 4.300 mAh miaraka amin'ny Fast Charge 65W
Ny valiny dia fluidity, mora ny asa ary mihena ny fotoana famoahana. Tena tianay ny fahombiazan'ny tamba-jotra WiFi 6 araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary. Miaraka amin'i Realme UI 2.0, izay mamela antsika indray amin'ny tsiro hafahafa eo am-bavantsika noho ireo bloatware tafiditra ary tsy nisy nangataka.
Manana tontonana efa ho 6,5 santimetatra izahay amin'ny famahana ny FullHD + novokarin'i Samsung, indrindra ny Super AMOLED Miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120 Hz izay avo telo heny raha ny efijery mikasika azy dia manana 100% ny spectrum DCI-P3, izay mahatonga ny tontonana ho iray amin'ireo manintona indrindra an'ilay fitaovana. Ny famirapiratana dia mihoatra noho ny ampy ho an'ny ivelany indrindra ary tena nahafinaritra anay ny nampiasa azy.
Momba ny habetsahana, na dia nanambara mpandaha-teny roa aza izahay, dia hitanay fa be loatra ny ambany noho izy manana feo avo sy avo lenta, Raha mbola tsy manarona azy amin'ny tananao ianao, angamba ny lafiny kely indrindra miharihary amin'ny traikefa multimedia.
Raha ny momba ireo sensor telo aoriana, dia mahita valiny saika mitovy amin'ny an'ny Realme GT isika, amin'ity Master Edition ity dia mbola manana sensor lehibe tena tsara isika saingy orinasa tsy ampy:
Main sensor: 64 MP f / 1,8
Wide Angle Sensor: 8 MP f / 2,3 miaraka amin'ny 119º
Sensor makro: 2 MP f / 2,4
Ho valiny farany, ny sensor lehibe dia manome fahombiazana tsara raha mbola tsy mitaky fampifanoherana maivana isika. Ny Wide Angle, ny zooms ary ambonin'izay rehetra ao amin'ny Macro dia orinasa marobe nefa mamirapiratra amin'ny toe-javatra tena tsara. Ny fakan-tsary, na dia samy hafa aza ny safidiny, dia voakitika mazava amin'ny hatsaran'ny kalitaon'ny "sensor" faharoa.
Portrait Mode sy fakan-tsary selfie (32 MP misy f / 2.5 aperture) rindranasa rindrambaiko be loatra indray izy ireo. Na dia mahavita tsara aza ny fakan-tsary eo aloha amin'ny toe-jiro tsara, ny 'sary' eo anoloana sy aoriany dia misy zavatra betsaka tokony hatsaraina.
Saripika eo aloha
Mikasika ny fandraketana horonantsary, Manasa anao izahay handeha amin'ny alàlan'ny famakafakana horonantsary izay nataonay tamin'ny feo ara-potoana ary freehand miaraka amin'ireo sensor rehetra an'ny Realme GT Master Edition.
Gaga izahay tamin'ny fahombiazan'ny karatra tambajotra WiFi 6 anao state-of-the-art izay namela anay hanararaotra tsara ny zava-bitan'ny fifandraisanay fibre optika. Mampalahelo fa tsy afaka nahazo valiny tamin'ny tambajotra 5G izahay noho ny tsy fahombiazan'ny fandrakofana.
Ny batterie 4.300 mAh misy fiampangana haingana 65W Mampiseho mihoatra noho ny ampy amin'ny fampisehoana isan'andro izy io, efa fantatsika fa miankina betsaka amin'ny fampiasantsika ny terminal izany.
Manana asa tsara avy amin'ny Realme izahay miaraka amin'ny fikasana "hampalaza" ny GT Master Edition, manitsy ny volavola sy ny endri-javatra mba hahazoana ny vidiny 299 euro (amidy) izay mamadika haingana azy amin'ny alàlan'ny famolavolana, ny fahaiza-manao ary ny fahaizan'ny toetrany ho iray amin'ireo terminal farany manaitra indrindra.
Drafitra mitandrina sy mahasarika maso, maivana be
Fitaovana lafo be
Sarimihetsika tsara sy famahanana haingana amin'ny 65W
Azo hatsaraina ny fakantsary
Tsara izany, nefa mbola plastika
Bloatware ao amin'ny Realme UI 2.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Realme GT Master Edition, famolavolana Japoney haminavina fahombiazana iray [Famakafakana]
Azo alaina amin'ny Cubot MAX3 misy fakantsary 48 MP amin'ny $ 99 ankehitriny